ပန်းပွင့်ခရစ္စမတ် Edition ကို |
ပန်းပွင့်ခရစ္စမတ် Edition ကို
ပန်းပွင့်ကိုတစျဦးဖွစျသညျ ထိပ်တန်း slot ဗြိတိန်နိုင်ငံ က NetEnt ကတီထွင်ခဲ့. ဒီနေရာမှာခရစ်စမတ်၏ရာသီနှင့်အတူ, ဒီ slot ကခရစ္စမတ်၏စိတ်ဓါတ်များနှင့်ကိုက်ညီ၌ဖြစ်နှင့်ကစားသမား store မှာသိုထားပြီသောအံ့သြဖွယ်အနိုင်ရစေဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့. အရက်ကြောင့်မှားယွင်းနဲ့ Flowers ခရစ္စမတ် Edition ကို၌ဤအများကြီးစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောပွဲတော်၏ဂုဏ်အသရေကိုပြသနောက်ခံအပေါ်လှပတဲ့ပန်းပွင့်ရှိတယ်. ခရစ္စမတ်အလှဆင်တိုင်းလှည့်ဖျားနှင့်အတူပွဲလမ်းသဘင်စိတ်ဓါတ်များသို့ကစားသမားရဖို့သေချာ.
နောက်ထပ်, ကစားသမားမှကြီးမားကျယ်ပြကိုအနိုင်ပေးဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်အချို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာ features တွေရှိပါတယ်. အချို့အလွန်ကြီးစွာသောဆုလာဘ်အနိုင်ရဖို့အဆင်သင့် Get နှင့်ထိပ်တန်း slot ဗြိတိန်ဂိမ်းရဲ့ဒီဗားရှင်းနဲ့ဘယ်တော့မှရှေ့ကတူသောဂိမ်းအတှေ့အကွုံပျော်မွေ့ . အဆိုပါရာသီကျိန်းသေဒီ slot ကအတူကြွယ်ဝပြည့်စုံခဲ့သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူသင်တို့အဘို့အတက်တောက်ပစေတယ်လိမ့်မည်. ဒါကြောင့်, တက် buckle နှင့်ဤ slot ကဂိမ်းနှင့်အတူကျိုးနပ်လမ်းခရီးဘို့အဆင်သင့်မရ.
ပန်းပွင့်ခရစ္စမတ် Edition ကို၏ရေးသားသူနောက်ထပ်
NetEnt အားဖြင့် Powered, ပန်းပွင့်ခရစ္စမတ် Edition ကိုကိုမှအရသာခံရဖို့တစ်ဖျော်ဖြေမှုထိပ်တန်း slot ဗြိတိန်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်. NetEnt အမြဲကဖန်တီးအရည်အသွေးဂိမ်းလူသိများခဲ့ပြီးသူတို့အသီးအသီးလောင်းကစားရုံဂိမ်းနှင့်အတူသူတို့တိုးတက်ကြောင်းသေချာပါစေ, ကစားသမားတစ်ဦးအံ့သြဖွယ်ဂိမ်းအတှေ့အကွုံခံစားရ.
အ Gameplay အကြောင်းနှင့်ဘယ်လို Play မှ
ဗြိတိန်၏ရေးစပ်သည်ဤသည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ထိပ်တန်း slot5ရက်ကြောင့်မှားယွင်းခြင်းနှင့် 30 paylines, နှင့်ကိုင်ရကစားသမားအချို့အလွန်ကြီးစွာသောကိုအနိုင်ပေးရှိသည်သောအမျိုးမျိုးသောသင်္ကေတများရှိပါသည်. သစ်သားနယ်စပ်အပေါ်သတ်မှတ်ရက်ကြောင့်မှားယွင်းခရစ္စမတ်၏ဘဏ္ဍာနှင့်မြင့်မားခြင်းနှင့်အနိမ့်ပေးဆောင်ခြင်းသင်္ကေတများရေးသားခြင်းအရက်ကြောင့်မှားယွင်းနှင့်အတူအလှဆင်ထားတဲ့.
အဆိုပါအနိုင်ရငွေပမာဏကိုကဒ်အထိုင်များရေးစပ်သောကွဲပြားခြားနားတဲ့သင်္ကေတများနှင့်အတူချက်ချင်းတိုးမြှင်နိုင်ပါတယ်. မတူညီသောပန်းများကွဲပြားခြားနားသောတန်ဖိုးများကိုအသီးအသီးရှိ, အသီးအသီးကိုင်သောတန်ဖိုးများကိုသိရန်အ paytable ဖတ်.
အဆိုပါလစန်တာရဲ့ဦးထုပ်သည်ဒီ slot ကဂိမ်းထဲမှာရိုင်းနှင့်စံချိန်ပေါင်းစပ်ဖြည့်စွက်ဖို့တခြားသူတွေကိုအစားထိုးပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါကြဲဖြန့်မိုဃ်းတိမ်သည်, ကအနိုင်ပေးတို့ကိုများပြားစေခြင်းနှင့်နှစ်ဆယ့်အရာအတွက်အခမဲ့လှည့်ခြင်းများပတ်ပတ်လည်သို့ကစားသမားကြာဘို့ကိုလည်းအခမဲ့သင်္ကေတ spins.
ရိုင်း, ကြဲဖြန့်, အခမဲ့လှည့်ခြင်းများကဒီ slot ကဂိမ်းထဲမှာကြိုး features နဲ့ကျည်များမှာနှင့်ကချက်ချင်းအနိုင်ရရှိပမာဏကိုမြှင့်တင်ရန်လိမ့်မည်.
Coinfalls ကာစီနိုမှာပန်းခရစ္စမတ် Edition ကို Play နှင့်ဤထိပ်တန်း slot ဗြိတိန် slot ကဂိမ်းထဲမှာမတူညီတဲ့ features တွေနှင့်အတူများစွာသောကိုအနိုင်ပေးကိုင်ရ. ခရစ္စမတ်အလင်းအိမ်တစ်ခုချင်းစီလှည့်ဖျားနှင့်သင့်အဘို့အချို့သောအံ့သြဖွယ်ကိုအနိုင်ပေးဆောင်ခဲ့ကြစေ.